Saint Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Pendants - Popular Jewelry
Michael (Prokpọ okwu Hibru: [ọrịre]; Hibru: מִיכָאֵל, romanized: Mîkhā'ēl, udo. 'Isnye dị ka Chineke?'; Greek: Μιχαήλ, romanized: Mikhaḗl; Latịn: Maịhelhel; Coptic: ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ; arabic: ميخائيل ، مِيكَالَ ، ميكائيل, romanized: Mīkā'īl, Mīkāl ma ọ bụ Mīkhā'īl) bụ onyeisi ndị mmụọ ozi in Okpukpe ndị Juu, Christianity, na Islam. na Roman Catholic, Ọtọdọks nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ, Anglican, na Lutheran sistemụ okwukwe, a na-akpọ ya "Saint Michael Onye-isi-nkwọ" na "Saint Michael". Na Ọtọdọks nke Oriental na Ọtọdọks nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Okpukpe, a na-akpọ ya "Saint Michael the Taxiarch". Na ndị ọzọ Protestant ụka, a na-akpọ ya "Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael".
Ekwuru Michael ugboro atọ na Akwụkwọ Daniel. Echiche nke na Maịkel bụ onye na-akwado ndị Juu bịara bụrụ ihe zuru ebe nile nke na, n'agbanyeghị mmachi nke ndị rabaị megide ịrịọ ndị mmụọ ozi ka ọ bụrụ onye ogbugbo n'etiti Chineke na ndị ya, Maịkel bịara biri n'otu ebe na Jehova Iwu ndị Juu.
na New Testament Maikel buru ndi-agha nke Chineke imegide ha SatanNdị agha dị na Akwụkwọ Mkpughe, ebe n'oge agha n’eluigwe ọ na-emeri Setan. Na Akwụkwọ ozi Jud A na-ezo aka na Michael dịka "onyeisi ndị mmụọ ozi Michael". Ebe nsọ nke Katọlik nye Michael pụtara na narị afọ nke anọ, mgbe mbụ a hụrụ ya ka mmụọ ozi na-agwọ ọrịa, emesia oge dị ka onye nchebe na onye isi ndị agha nke Chineke megide ike nke ihe ọjọọ.
Iyo 14 Karat ọla edo 18 Karat ọla edo angel Animal Onyeisi Ndị Mmụọ ozi Gemstone Artificial Badge Baguette Nwa ola edo acha anụnụ anụnụ Christianity cubic Zirconia Mmụọ Ọjọọ diamond Ogwu Diamond Jesus lucifa matte Medulion ndị ikom Oval pendant Ọla edo edo Religious Gburugburu Saint Saint Michael agwọ Ọla ọcha chapụrụ achapụ Gold-agba ọla edo Nke abuo Ọla edo abụrụ nke agba Unisex White ola di ocha White Gold Women Yellow Yellow Gold
Typesdị niile Anklet Isi ọla / ịkpọpu akụkụ mgbaaka Ncha Bullion / mkpụrụ ego / mkpokọ Custom Mgbisi ntị Onyinye Kaadị Ọcha ọla Mkpọchi / mgbachi olu pendant Ring Watch
Ndị na-ere ahịa niile Mgbakọ PAMP Perth Mint Popular Jewelry Rolex Royal Canadian Mint United States Mint
Apụta kasị mma n'ire Alphabetically, AZ Alphabetically, ZA Price, ala elu Price, elu ala Ụbọchị, agadi ọhụrụ Ụbọchị, ọhụrụ ka ochie
Onye isi ndị mmụọ ozi Michael Scale na mma agha Filigree Pendant-Tone Pendant (14K)
site $ 171.59
Onye isi ndị mmụọ ozi Michael Spear Filigree Pendant abụọ nke gbara agba 14K
site $ 272.39
Onye isi ndi Michael Michael Abụọ Pendant 14K
site $ 401.99
site $ 358.79
Tri-Agba Saint Michael CZ Pendant (14K)
Saint Michael Oval Medallion Ihe (14K)
Saint Michael Gburugburu Medallion Pendant (14K)
Saint Michael Medal Ihe (14K)
site $ 195.59
Tricolor Saint Michael Pendant (14K)
Matte-Finish Diamond Mbepu Saint Michael Pendant (14K)
site $ 259.00
Abụọ Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Onye Ozi Michael Pendant (14K)
site $ 159.00
Page 1 nke 3 Osote